Wararka - Waa Maxay Saldhigga Dabaqa?
Waa Maxay Gogosha Dabaqa?
Godka sagxadda dhulku waa qaboojiye fur oo ku yaal dabaqa. Noocyada noocan ah waxaa loo samayn karaa fiilooyin fara badan oo kala duwan, laakiin badanaa waxaa loo isticmaalaa isku xidhka korontada, taleefanka, ama fiilooyinka. Isticmaalka saldhigyada dhulka waxaa si aad ah loogu nidaamiyaa xeerarka dhismaha meelo badan.
Bareesada korantada ama meelaha laga baxo ayaa badanaa ku yaal darbiyada.
Xaaladaha badankood, korontada iyo noocyada kale ee saldhigyada ama saldhigyada waxay ku yaalliin gidaarrada ama looxyada hoose. Qolka caadiga ah ee la deggan yahay ama qolka ganacsiga, godadka noocan oo kale ah guud ahaan waxay ku yaalliin masaafo gaaban dabaqa waxaana laga yaabaa in la dhigo meel ka sarraysa miisaska musqusha iyo jikada. Dhismaha warshadaha ee caadiga ah, ilaha ugu badan ee noocan oo kale ah waxaa lagu dhejiyaa gidaarrada ama tiirarka ku ag yaal mishiinnada. Xaaladaha qaarkood, si kastaba ha noqotee, bareesada dabaqa ah waa mid la jecel yahay maxaa yeelay waxay ka hortageysaa socodsiinta xargaha meelaha laga yaabo inay khatar ku yihiin safarka.
Tusaale ahaan, qolka fadhiga ee la deggan yahay waxaa loo qaabeyn karaa qaab aan sariirta lagu dhejin karin derbiyada iyadoon laga horjoogsanayn gelitaanka qolalka kale. Haddii milkiilaha gurigu doonayo inuu dhigo laambad wax akhris oo ku yaal sariirta dhinaceeda dambe, waa inay xarigga ka jaftaa sagxadda dhulka ilaa godka korontada ee kuugu dhow. Tani waxay noqon kartaa mid aan soo jiidasho lahayn. Waxay sidoo kale keeni kartaa halista ah in xayawaan rabaayad ah ama xubin qoyska ka mid ah ay ku dul socdaan xarigga, taas oo u horseedi karta waxyeelo tareenka iyo laambadda labadaba. Meeleynta sagxad dabaq ah oo sariirta agteeda ah ayaa meesha ka saareysa dhibaatadan.
Qaybta bidix ee qadaadiicdu waxay tahay in fiilooyinka la geliyay godad sagxado ah oo si khaldan loo dhigay ay dhab ahaan isu noqon karaan khataro safar. Tani waxay si gaar ah run ugu tahay dhismayaasha warshadaha iyo kuwa ganacsiga halkaasoo mas'uuliyadda had iyo jeer laga hadlayo. Saldhigyada sagxadda dhulka ayaa sidoo kale dad badani u maleeyaan inay ka dhalan karaan halista dabka marka loo eego godadka gidaarka.
Ku rakibidda daaqadaha dabaqa inta lagu jiro dhismaha cusub ayaa noqon kara khiyaano meelo ka mid ah adduunka. Xeerar badan oo dhismaha ayaa mamnuucaya rakibidda godka dabaqa gebi ahaanba. Qaar kale waxay amraan in lagu rakibo oo keliya sagxadda adag sida dhoobada ama alwaaxda oo aan lagu dhigin sagxadda jilicsan sida rooga. Qaar kale waxay u oggolaadaan meelaha dabaqa ah dhismaha warshadaha laakiin aan loo oggolaan dhismaha ama dhismaha ganacsiga, halka kuwa kale ay sheegaan waxa ka soo horjeedka saxda ah.
Fiilooyinka ama ku rakibida godka sagxadda ee dhismaha jira ama lama oggolaan karo lambar. Hadday sidaas tahay, koodhku wuxuu u baahan karaa in shaqada laga qabto koronto yaqaan shati haysta. Haddii lambarrada maxalliga ahi oggolaadaan rakibidda saldhigyada dhulka, milkiilaha dhismuhu waa inuu xusuusnaadaa in rakibidda noocan ahi ay qaali noqon karto ama aan macquul ahayn haddii koronto-yaqaanku aanu soo geli karin dhulka hoostiisa, sida xaaladda dabaqyada shubka ah. Haddii sagxaddu ku jirto heer labaad, qayb ka mid ah saqafka hoose ayaa u baahan kara in laga saaro si loo rakibo godka.